Maxay yihiin astaamaha shaandhaynta koowaad, iyo sida loo nadiifiyo loona ilaaliyo maalin kasta-Warshadaha Wararka-Shanghai Sffiltech Co., Ltd.
Maxay yihiin astaamaha shaandhada koowaad, iyo sida loo nadiifiyo loona ilaaliyo maalin kasta
Waqtiga: 2021-07-22 Hits: 69
Shaandhaynta saamaynta asaasiga ahi maaha mid nolosha lagu yaqaan. Waxaa badanaa loo isticmaalaa sifeynta aasaasiga ah ee nidaamka qaboojiyaha. Waxay si hufan u shaandheyn kartaa boodhka iyo urta hawada ku jirta. Shaandhaynta saamaynta asaasiga ah waxaa loo qaybin karaa shaashadda koowaad ee saxanka iyo shaandhada asaasiga ah ee laaban karo iyadoo loo eegayo qaababka kala duwan. Waxaa jira saddex nooc oo miirayaal ah iyo shaandhooyin asaasi ah oo nooca bag ah. Noocyada kala duwan ee miirayaasha aasaasiga ah waxay leeyihiin waxqabadyo kala duwan.
Ugu horreyntii, aan fahamno maxay yihiin astaamaha shaandhada koowaad? Ugu horreyntii, qiimaha miiraha aasaasiga ah ayaa yara hooseeya, waxqabadka kharashkuna wuu ka sarreeyaa. Ku dhowaad dhammaan xafiisyada ama bay'ada guryuhu waa kuwo aan laga sooci karin shaandhada aasaasiga ah, sidaa darteed waxay caan ku tahay soo dhaweynta dadweynaha, marka labaad, miiraha waxtarka koowaad ayaa sidoo kale leh muuqaal muhiim ah oo ah awoodda haynta boodhka weyn, waxtarka sifaynta sare, iyo waqtiga dheer ee socda. Way sii socon kartaa muddo dheer si loo hubiyo waxqabadka sifeynta xasilloon, iyo miiraha waxtarka bilowga ah ma laha shuruudo aad u sarreeya oo loogu talagalay deegaanka rakibidda. , Sheyga laftiisa ayaa degan aag yar waxaana loola qabsan karaa deegaanno kala duwan oo rakibid ah, iyagoo si weyn u badbaadinaya isticmaalka booska. Miiraha hore waa fududahay in la shaqeeyo. Xaaladaha caadiga ah, waxaad si buuxda u fahmi kartaa habka isticmaalka hal ama laba hawlgal ka dib. Dayactirka kadib shaandhada asaasiga ah waa mid aad ufudud una fududahay in la nadiifiyo, waxay leedahay nolol adeeg dheer, waxayna sumcad ku leedahay suuqa. Markaad iibsaneyso shaandhada bilowga ah, waa inaad waxbadan ka ogaataa, oo amnigeedu wuu sii fiicnaan doonaa si loo doorto badeecad kharash-ku-ool ah.
Marka, sidee loo nadiifiyaa loona ilaaliyaa shaandhada koowaad inta lagu jiro isticmaalka maalinlaha ah? Xaaladaha caadiga ah, shaandhada asaasiga ah waxay u baahan tahay in la beddelo lixdii biloodba mar, waana in nadaafadda la hubiyaa labadii biloodba mar. Markaad nadiifinaysid shaandhada koowaad Waqtigaan, marka hore ka saar shaandhada asaasiga ah iyadoo loo raacayo habka saxda ah.
Marka boodh badani aanu jirin, waad ku biyo mari kartaa biyo. Haddii boodh badani jiraan, waxaad u isticmaali kartaa qalab xirfad leh si aad uga saarto. Nadiifinta kadib, dhig miiraha aasaasiga ah meel qabow oo qalaji. Ka dib marka shaandhada aasaasiga ahi gebi ahaanba qalajiso, ku rakib iyada oo loo eegayo habka saxda ah. Dhameystirka kadib, taabo oo hayso batoonka dib udajinta calaamadda shaandhada shaashadda kumbuyuutarka, heerka nadiifinta ayaa baabi'i doona, oo tilmaamaysa in nadiifinta ay gaadhay nadaafadda, iyo miiraha asaasiga ah ayaa si caadi ah loogu isticmaali karaa si wax ku ool ah looga saaro walxaha waxyeelada leh ee hawada ku jira iyo hagaajinta nadaafada hawada. Waxay u dhistay qalcad aamin ah caafimaadka dadka. Miiraha koowaad wuxuu ka dhigayaa waxsoosaarka mid waxtar badan, wuxuu caafimaadka ka dhigaa mid caafimaad qaba, wuxuuna wax ku biiriyaa ilaalinta deegaanka. Maalmahan, booska suuqa ee shaandhada aasaasiga ahi si joogto ah ayuu kor ugu kacayaa, rajada horumarkuna aad ayey u wanaagsan tahay.
HOREWaa maxay xogta tixraaca ee sida loo doorto miirayaasha warshadaha
NEXTMaxaad u dooranaysaa shaandhada heerkulka u adkeysata? Waa maxay saamaynta